olom-pirenena mandray andraikitra mba hanjakan'ny fahamarinana, izay manohana ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana omaly. Adidy iraisana amin’ny tanindrazana ny mamaky bantsilana ireo endrika tsy fahamarinana efa nolazain’ny sasany ihany, ary katsahina mbola haverina amin’ity fihodinana faharoa ity, hoy ny Pasitera Roger Randriamisata. Endriky ny tsy fahamarinana maro no efa natao sy mbola hokasain'ny kandida iray atao mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana, hoy ny fikambanana SAMARITANA. Hita ary hananana porofo ny fampiasana "Specimen" mba ahazoana bileta tsy nampiasaina mba havadika ho bileta voamarika (X) mialoha. Tao ihany koa ny fanaovana "bourrage d'urne" izany hoe natakalo ilay "urne", tany amin'ny faritra Marovoay. Misy ny finiavana tsy hizara ny karatry ny mpifidy ary misy olom-boafidy manangona ireny karatra tsy nozaraina ireny. Maro raha tanisaina ny endrika tsy fanarahan-dalàna nataon'ny kandida iray nandritra iny fifidianana fihodinana voalohany iny. Araka izany, nanangana ilay antsoina hoe "Comité de vigilance" ny fikambanana hanara-maso mialoha, mandritra ary ao aorian'ny fifidianana amin'ny 19 desambra ity mba hiarovana ny fahamarinana sy ny safidim-bahoaka. Manainga ihany koa ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena indrindra ny Praiministra sy ny Minisitry ny atitany mba tsy hiandany na amin'iza na amin'iza satria nambaran’izy ireo fa misy olom-panjakana mihitsy no manao ny teti-dratsy.